HAIRANY | NY HAIRANAREO
Slideshow pause Lalao fampisehoana slide
Ity dia tsipika natao manokana ho an'ny hodi-doha salama. Izy io dia vita amin'ny Bain Divalent mba hanesorana menaka nefa tsy manimba ny tendrony saro-pady, Argile Equilibrante ho an'ny detox isan-kerinandro, ary Masque Rehydrant izay mampifandanja avy hatrany ny haavon'ny hydration tena ilaina amin'ny volo. Ny vokatra kintana dia ny Serum potentialiste izay serum fiarovana manerantany voalohany ho an'ny hodi-doha tsy voalanjalanja.
Maria Nila dia marika fikarakarana volo izay 100% vegan ny vokatra ary 100% tsy misy herisetra (Nohamarinin'ny PETA, LEAPING BUNNY SY VEGAN SOCIETY) manomboka amin'ny famokarana ka hatramin'ny fandefasana. Rehefa misafidy an'i Maria Nila dia safidio ny VEGAN, Animal Friendly ary koa vokatra maharitra sy tombana ara-tontolo iainana.
Ity dia marika ho an'ireo mitady vokatra tena tsara ary miahy ny biby sy ny Planeta onenantsika rehetra!
BR NY MARIKA ↓
Ho an'ny volo mangatsiaka, miaraka amin'ny Highlight na Balayage, REDKEN dia manolotra Acidic Bonding Concentrate, izay fitsaboana Hydration + Repair izay manova ny volo amin'ny alàlan'ny Acid PH.
Ny LOLA dia tsy miasa amin'ny cosmetika fotsiny, fa amin'ny fanajana, manavao hatrany ny teknolojia, ny fifandraisana, ny faharetana ary ny fanoloran-tena amin'ny tontolo iainana. LOLA dia marika VEGAN iray miahy ny biby eto amin'izao tontolo izao ary manohitra ny fitsapana ny karazana biby rehetra. Ny vokatra dia tsy misy: Parabens, phthalates, sulfates, silicones tsy azo sakanana, ogama, menaka mineraly, paraffin ary biby avy amin'ny biby.
Raiso ny tolotra manokana!
Raiso fanentanana manokana sy fampiroboroboana ho an'ny mpanjifantsika isam-bolana amin'ny mailakao.
Misoratra anarana amin'ny vaovao farany, tolotra sy fomba
HAIRDRESSERS STUDIO HAIR / HAIR ANDREO
Alatsinainy - Sabotsy 10 maraina - 00 hariva